The Garden of Words – MMANIME
PG-13 46min Uncategorized
IMDB: 7.5/10/10 7.5/10 votes
Fumi Hirano, Kana Hanazawa, Megumi Han, Mikako Komatsu, Miyu Irino, Suguru Inoue, Takanori Hoshino, Takeshi Maeda, Yuka Terasaki
ဒီတခါမှာတော့ မိုးရှာရငျဘသူ့ကိုလှမျးမှနျးမသိဖွဈတတျတဲ့လူတှအေတှကျရော အfeel တလိုငျးလေးကိုကွညျ့ခငျြတဲ့လူတှအေတှကျပါ အဆငျပွစေမေယျ့ တျောတျောမြားမြားလညျး ကွညျ့ဖူးပွီးဖွဈမယျ့ ဇာတျကားလေးကို တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျဗြ
ဇာတျလမျးအကဉျြးလေးကိုတော့ မကွညျ့ရသေးတဲ့လူတှအေတှကျ ရညျရှယျပီးရေးပေးလိုကျပါတယျဗြ
Shoes makerဖွဈခငျြတဲ့ Takao Akizuki ဆိုတဲ့အထကျတနျးကြောငျးသားတ​ယောကျက မိုးရှာတဲ့ရကျတှမှောပနျးခွံထဲကိုသှားတတျပီး ဘီယာနဲ့ခြောကလကျကိုဘဲသောကျတတျတဲ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျနဲ့ ဆုံခဲ့ပါတယျ။ လြှို့​ဝှကျတတျတဲ့သူမနဲ့ စကားတှပွေောရငျး အခြိနျတှကွောတဲ့အခါမှာ သံယောဇဉျတှယျမိသှားတယျ ။ နောကျပိုငျးမှာ သူမရဲ့ ဘဝမှနျကို သိသှားတဲ့အခါမှာတော့ ခံစားခကျြကိုဘဲရှတေ့နျးတငျပီးဇှတျတိုးမလား သူခဈြတဲ့သူမအတှကျဘဲနောကျဆုတျပေးမလားဆိုတာကို ကွညျ့ရှု ရမာဖွဈပါတယျ ။ like and shareလေးနဲ့အားပေးကွပါဦး
Translated by Thatoe
Encoded by Swam Yi
ဒီတခါမှာတော့ မိုးရွာရင်ဘသူ့ကိုလွမ်းမှန်းမသိဖြစ်တတ်တဲ့လူတွေအတွက်ရော အfeel တလိုင်းလေးကိုကြည့်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ပါ အဆင်ပြေစေမယ့် တော်တော်များများလည်း ကြည့်ဖူးပြီးဖြစ်မယ့် ဇာတ်ကားလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျ
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကိုတော့ မကြည့်ရသေးတဲ့လူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပီးရေးပေးလိုက်ပါတယ်ဗျ
Shoes makerဖြစ်ချင်တဲ့ Takao Akizuki ဆိုတဲ့အထက်တန်းကျောင်းသားတ​ယောက်က မိုးရွာတဲ့ရက်တွေမှာပန်းခြံထဲကိုသွားတတ်ပီး ဘီယာနဲ့ချောကလက်ကိုဘဲသောက်တတ်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ ဆုံခဲ့ပါတယ်။ လျှို့​ဝှက်တတ်တဲ့သူမနဲ့ စကားတွေပြောရင်း အချိန်တွေကြာတဲ့အခါမှာ သံယောဇဉ်တွယ်မိသွားတယ် ။ နောက်ပိုင်းမှာ သူမရဲ့ ဘဝမှန်ကို သိသွားတဲ့အခါမှာတော့ ခံစားချက်ကိုဘဲရှေ့တန်းတင်ပီးဇွတ်တိုးမလား သူချစ်တဲ့သူမအတွက်ဘဲနောက်ဆုတ်ပေးမလားဆိုတာကို ကြည့်ရှု ရမာဖြစ်ပါတယ် ။ like and shareလေးနဲ့အားပေးကြပါဦး
Fumi Hirano Kana Hanazawa Megumi Han Mikako Komatsu Miyu Irino Suguru Inoue Takanori Hoshino Takeshi Maeda Yuka Terasaki
Option 1 Mediafire 700mb 720p
Option2Mediafire 400mb 480p
rolex daytona replica watches says:
January 24, 2022 at 4:04 AM
381373 74640Hey! Do you use Twitter? I?d like to follow you if that would be ok. I?m certainly enjoying your weblog and look forward to new updates. 509625
December 9, 2021 at 4:00 AM
I’ve been browsing on-line more than three hours today, but I by no means found any interesting article like yours. It?¦s beautiful worth sufficient for me. Personally, if all web owners and bloggers made excellent content material as you probably did, the web might be much more helpful than ever before.
Fate Universe 3
Martial art 2
Slice of life 11
Action & Adventure 86
Dark fantasy 1
Reverse Harem 0
Sci-Fi & Fantasy 61
Slice of life 23
Yaoi or BL or Yuri 2
2010 to jun 20
HEVC BD 1080p 5.1
HEVC BD 1080p FLAC
Noblesse: The Beginning of Destruction 2015
Lupin the Third: Goemon Ishikawa’s Spray of Blood
One Piece Adventure Of Nebulandia
Asagao to Kase-San(Ova)
Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll 2019
One Piece: Episode of Merry – Mou Hitori no Nakama no Monogatari
A Silent Voice 2016
Altered Carbon: Resleeved 2020
One Piece going Merry
MMANIME © 2022 All rights reserved Developed By MMANIME & Pain Organization